Fatahaadaha uu sameynaayo Wabiga Shabeelle ayaa sii korartay - Awdinle Online
Fatahaadaha uu sameynaayo Wabiga Shabeelle ayaa sii korartay
October, 24, 2019 (AO) – Waxaa si balaaran u sii kordhaya saacad waliba cabsida laga qabo in fatahaadda Wabigu ay saameyso xaafaddo markii hore aysan gaarin, kaddib markii ay biyaha gaareen heerkoodii ugu sareeyay.
Durba Waxaa biloday barakacayo hor leh oo ay sameynayaa Qoysas markii hore rajo ka qaba is badal uu sameeyo Wabiga, iyaga oo ka war-helay in jiraan biyo biyo badan oo Wabiga uga soo socda dhanka dhulka sare ee Itoobiya, kuwaa oo saacadihii aynu soo dhaafnay soo gaaray qeybo ka mid ah gobolka Hiiraan
Deegaanadda iyoiyo xaafaddaha hadda cabsida ugu weyn laga muujinayo ayaa waxaa ka mid ah Xaafadda Buundo-Weyn oo qaarkoo hadda Qoysaskii ku noolaa bilaaabeen in ay isaga baxaan.
Dhinka kale waxaa jira fariimo ka imanaya dadka ku dhaqan dhulka deegaannada xadka uu gobolku la wadaago Itoobiya oo dadka ku nool magaalada uga digaya biyaha ku soo socda, inkastoo dhanka kale marka la eego deegaannada Mustaxiil iyo Khalaafe laga soo sheego in ay hoos u dhaceen biyaha Wabiga.
Fatahaadahan ayaa sidoo kale saameyn ku yeelatay goobihii waxbarashada, madaama Ardeydii wax ka baran jirtay intooda badan isaga baxeen magaalada, halka qaarkoodna ay saameysay fatahaada.
Maamulka gobolka Hiiraan ayaa baaq u diray hay’addaha gargaarka si gurmad deg deg ah loola gaaro dadka ku barakacay dulleedka magaalada oo hadda wajahaya xaalado culus oo dhinaca nolasha ah.
Guddoomiyaha gobolka Cali Maxamed Caraale ayaa maanta ku soo wareegay qaar ka mid ah xaafaddaha ay fatahaadu saameysay.
Hay’adda bisha Cas ayaa iyana diyaarisay Doomo loogu tala-galay in dadka looga soo saaro xaafaddaha haddii ay xaaladu cuslaato, inkastoo wali isku socodka magaaladu yahay mid furan.
Previous articleThousands at risk as Juba and Shabelle rivers near breaking point
Next articleSoomaaliya iyo Jabuuti oo shir ku baaqay xilli khilaafka IGAD uu sii xoogeystay